I-Trenbolone Acetate (i-Tren ace) i powder (10161-34-9) hplc =98% | I-AASraw
/ Imikhiqizo / Anabolics Steroids / I-Trenbolone ye-powder Series / Trenbolone Acetate (Tren ace) powder
3.00 koku 5 ngokusekelwe ku 3 izilinganiso ikhasimende
SKU: 10161-34-9. Categories: I-Trenbolone ye-powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw inokukwazi ukuqala nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugremu kuya ku-mass mass ye-Trenbolone Acetate (i-Tren ace) powder (i-10161-34-9), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
I-Trenbolone Acetate (i-Tren ace) i-powder video
I-Trenbolone Acetate emifutha (Tren ace) powder Izinhlamvu eziyisisekelo
Igama: I-Trenbolone i-Acetate powder powder
Formula Yamamolekhula: C20H24O3
Isisindo somzimba: 312.4
I-Melt Point: 90- 92ºC
Isitoreji Sokugcina: I-0-6 ° C
Umbala: I-powder ephuzi eliphuzi
I-Trenbolone Acetate (i-Tren ace) ewutshani olusetshenziswayo emjikelezweni we-steroids
I-Trenbolone i-Acetate powder evame ukubizwa ngokuthi yi-Tren A, i-Tren ace powder (i-CAS 10161-34-9), i-Revalor, i-Finaplix, i-Finajet, ngabanikazi bomzimba noma abanikazi be-UGL.
Ukusetshenziswa okusetshenzisiwe kokusetshenziswa kwe-Trenbolone e-Acetate powder
I-trenbolone i-Acetate powder isetshenziswa ngokujwayelekile kuma-35-150 mg / ngosuku, futhi ngokujwayelekile nge-50-100 mg / ngosuku.
Iningi labasebenzisi bathola i-50-75 mg / usuku ukuze kube yilala yezinga elilinganiselwe, linikeze inzuzo enhle kakhulu njengengxenye yokugcina i-anabolic steroid.
I-Trenbolone i-Acetate powder (I-CAS 10161-34-9) isetshenziswa ngokujwayelekile ngamanani we-35-150 mg / ngosuku, futhi ngokujwayelekile nge-50-100 mg / ngosuku. I-35 mg figure ngokuvamile ibalulekile kuphela uma unomzwelo ophezulu wemiphumela emibi ye-trenbolone. Uma ukusebenzisa i-trenbolone lokhu okuphansi futhi umjikelezo ophumelelayo kuyadingeka, enye i-steroid anabolic injectable kufanele ifakwe. I-Masteron yinto enhle kule nhloso. Enye, ukukhetha okuhlukile kakhulu yi-testosterone.
Ngokuqondene ne-150 mg / isibalo esiphezulu, lokhu kuvame ukusetshenziswa ngenhloso yokwanda kwesimiso sezinzwa uma kuqhathaniswa no-100 mg / usuku kunokuba kwenziwe ngcono ukuthuthukiswa kwamandla noma okunamandla, okwenziwe ngcono noma okukhulunywa kakhulu ku-100 mg / ngosuku.
Lezi zimali ze-milligram ziphansi kakhulu ngokwe-steroid ye-anabolic injectable. Esinye sezizathu ukuthi i-trenbolone iphawuleka kakhulu (nge-milligram ngayinye.) Esinye isizathu ukuthi ngoba i-acetate ester ikhanya ngokungavamile, iphesenti eliphezulu kakhulu yesisindo se-Trenbolone Acetate powder molecule yi-steroid esebenzayo.
Isexwayiso ku-Raw Tren ace powder
Impendulo engathí sina ye-Equipoise yimizuzu emide yokuphila, okungenani okungenani izinsuku ezingu-12. Lokhu kubangela isikhathi esingeze isikhathi ngemuva kokujola kokugcina lapho amazinga angenasiphelo ngokwanele ukuze abe ne-anabolism engcono, noma aphansi ngokwanele ukuvumela ukululalwa kwenzeke. Isixazululo salenkinga ukusebenzisa i-Equipoise kuphela engxenyeni yangaphambili yomjikelezo.
Ngokuphambene, iphesenti ye-trenbolone ye-enanthate ye-steroid esebenzayo cishe i-20% ephansi. Ngenxa yalesi sizathu, ukulinganisa kwamasonto onke we-trenbolone enanthate kuphakeme kakhulu kune-acetate. Ukuze i-enanthate, ukulinganisa isamba samasonto onke kujwayelekile nge-300-800 mg.
Ngokungafani ne-Trenbolone i-Acetate powder ene-half-life kuphela yosuku lwe-1 ngakho-ke kufanele isetshenziswe nsuku zonke, i-trenbolone enanthate ngokuvamile ifakwe ama-2-4 izikhathi ngesonto. Ukuphila kwengxenye kungenzeka cishe ngezinsuku ze-5.
Uma ungaqiniseki ngokuthinta i-trenbolone yomuntu siqu, i-acetate ester ifaneleka njengoba isula uhlelo ngokushesha. Kuyinto efiselekayo kakhulu ekusetshenziseni umjikelezo omfushane noma emasontweni okuphela emigqa yesikhathi eside ngoba imvume esheshayo inikeza ushintsho okusheshayo ekubeni namazinga aphezulu afanele imiphumela efanele kumazinga aphansi avumela ukutakula.
Nakuba ukusetshenziswa kwe-trenbolone akudingekile ukufezekisa imiphumela emihle kakhulu kumjikelezo we-anabolic steroid, kungaba usizo oluphawulekayo kulo miphumela.
I-Raw Tren ace powder (CAS 10161-34-9)
I-Trenbolone iphuzu lokuqhafaza i-Acetate = 200-205 F / 90-92 ° C
I-Trenbolone Acetate powder Marketing
III. i-Trenbolone Acetate eluhlaza (Tren ace) i-powder HNMR
Indlela yokuthenga i-Trenbolone Acetate powder (i-CAS 10161-34-9); Thenga i-Tren ace powder kusuka ku-AASraw
I-AASRaw inikeza ubumsulwa 99% trenbolone acetate i-powder eluhlaza kuma-bodybuilders noma amalebhu angaphansi komhlaba ukuze kusetshenziswe umjovo ekusebenzeni ukuze uthole inzuzo enkulu, ukuzuza amandla.
Trenbolone Acetate powder Ungadliwa
10g i-Trenbolone i-Acetate powder
I-3ml BA (3%)
I-15ml BB (15%)
Ukuthenga kuphi i-Trenbolone Acetate powder?
Ungakuxuba kanjani i-trenbolone eluhlaza i-acetate powder?
Akekho oyokutshela amaqiniso we-10 mayelana ne-Trenbolone Acetate